Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-UK Breaking » Izinxushunxushu ezimnyama ngoLwesihlanu eLondon njengoba abashayeli beTube begadla
Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ukuhamba Kwezitimela • Unomthwalo wemfanelo • Ukuphepha • Shopping • Ezokuvakasha • Transportation • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
Abashayeli bezitimela e-Unionized London Underground babambe isiteleka esikhulu ngo-Black Friday, bethi ukuhamba ngezinyawo kudalwe "ukuqothuka kwezivumelwano ezikhona kanye nezinhlelo zokusebenza ngaphambi kokuvulwa kabusha kwe-Night Tube."
Ithrafikhi yezimoto ezinhlanu ezinkulu London I-Tube lines - Central, Jubilee, Northern, Piccadilly kanye neVictoria - ithintwa isiteleka esihleliwe namuhla, kanti kulindeleke ukuthi kube nezinxushunxushu ohlelweni lwezokuthutha lwenhloko-dolobha yaseBrithani ngempelasonto.
NgokweRail Maritime and Transport Union (RMT), ehole isiteleka, amalungu ayo amaningi abengeneme ngamashifu amasha.
Ezokuthutha eLondon (TfL), inhlangano yomphakathi ebhekele ezokuthutha zomphakathi edolobheni, izwakalise ukudumala kwayo ngesinqumo se-RMT. Esitatimendeni, I-TfL uthe uhlu olusha lwethulwa kubashayeli bakwaTube ngo-Agasti futhi luhlanganisa neziqinisekiso eziningi kubasebenzi mayelana nokuphepha kwemisebenzi.
Ukuhamba kuphazamise izinsizakalo zonkana London ngolwesihlanu Olumnyama, olunye lwezinsuku zokuthenga ezimatasatasa onyakeni, ezithengiswayo ezitolo eziningi. Abanye babangenele isiteleka babonakale becosha eziteshini bephethe amafulegi namafulegi.
LondonImeya yaphinde yakhuluma ngokumelene nokuhamba. "Lesi senzo sesiteleka esingadingekile se-RMT sidala ukuphazamiseka okusabalele ezigidini zabantu baseLondon futhi sizothinta nabadayisa eLondon, amasiko kanye nokwamukela izihambi ngesikhathi esibi kakhulu," kusho uSadiq Khan kuTwitter.
Lesi siteleka sizoqhubeka ngoMgqibelo njengoba kuzobe kuneminye imigwaqo ehleliwe njengoba kuyiwa kuKhisimusi.
“Amakhasimende adinga ukuhamba esebenzisa I-TfL izinsiza zelulekwa ukuthi zibheke ngaphambi kokuba zihambe, zivumele isikhathi esengeziwe sohambo lwazo, futhi zihambe ngezikhathi ezithule lapho kungenzeka khona, ”kusho u-TfL, wengeza ngokuthi abantu baseCentral. London bayelulekwa “ukuhamba, ukujikeleza noma ukusebenzisa i-e-scooter” esikhundleni sokusebenzisa iThubhu.